एकै मानिसका १३ श्रीमती, ती पनि एकैसाथ गर्भवती ! | Nepal123.com
Author: admin Published Date: April 5, 2020 LeaveaComment on एकै मानिसका १३ श्रीमती, ती पनि एकैसाथ गर्भवती !
यतिसम्म कि विवाहपछि आजसम्म उनीहरु बिचमा कहिल्यै मनमुटाव र झगडा भएको छैन । बडो गज्जब छ, जहाँ दुई जनासंगको प्रेम मिलाउन मानिसलाई ग्राहो हुन्छ । यहाँ यी मानिसले १३ श्रीमतीलाई मिलाएर राख्ने मात्र होइन एकैसाथ गर्भवती समेत बनाएका छन् । स्र&#23
← ब्रमाण्डमा आमाभन्दा ठूलो केहि छैन : चाणक्य
कोरोना भाइरसको खोपमा सफलता मिलेको चीनको दावी →
Principal arrested red-handed with bribe